आजको राशिफल: वि.सं. २०७७ साल भाद्र ३ गते बुधबार तदनुसार ई.सं. २०२० अगष्ट १९ तारिख । – Butwal Sandesh
आजको राशिफल: वि.सं. २०७७ साल भाद्र ३ गते बुधबार तदनुसार ई.सं. २०२० अगष्ट १९ तारिख ।
वि.सं. २०७७ भाद्र-३ गते बुधबार तदनुसार ई.सं. १९ अगष्ट २०२०, आज कुशे औंसी / बुबाको मुख हेर्ने दिन / मोतीराम जन्मजयन्ती रहेको छ । सूर्योदय-५:३९, सूर्यास्त-१८:३९,
समाजसेवाको कार्यमा ध्यान जानेछ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। समाजसेवा जस्ता कार्यमा मन लाग्नेछ। बौद्धिक चि’न्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ।परिवारमा खुशी छाउनेछ।माया प्रेमको बन्धन थप सुमधुरता बढेर जानेछ । आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
झैझ*गडा र वि*वादमा सरिक हुनु पर्नेछ । पठन–पाठनमा केही धमिलोपन आउने छ । सोचेर बोल्नु होला। स्वास्थ्यमा बिशेष ख्याल राख्नु होला । जोश जाँगर र हिम्मत घट्नेछ । आजको शुभ अंक २,७ र १२ रहेको छ।
आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। परिवारमा खुशी छाउनेछ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।माजमा लोकप्रिर्य काम गरि नाम कमाउँन सकिनेछ ।कानले धोका दिन सक्छ राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु होला। गुप्त शत्रु बढ्न सक्छन । आजको शुभ अंक ३ र ६ रहेको छ।
मनमा सन्तुष्टि रहने छ। बोलिले साथ दिने छ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सहयोगी हातहरू अघि बढ्नेछन् । पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ।आज तपाइको घा’तक बार रहेको छ त्यसैले नया काम को सुरुवात नगर्नुहोला। आजको शुभ अंक २ र ४ रहेको छ।
मनमा सन्तुष्टि रहने छ।आयआर्जन बढ्ने छ । उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ।पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ।पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। आजको शुभ अंक १र ५ रहेको छ।
आटेको काम पुरा हुनेछ। लगानिबाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। सम्मानित हुने योग रहेकोछ । आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
धर्म कर्ममा मन जानेछ । सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । समाजसेवामा अरुको मन जित्ने सम्भावना रहेकोछ ।माया प्रेममा विस्वास सिर्जना हुनेछ।सपना पुरा हुने योग छ। साला सालि सँग भेट हुने योग छ। आजको शुभ अंक ४,९ र १२ रहेको छ।
दण्ड तथा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।गाडि चलाउ्दा बिशेस ध्यान दिनुहोला। झैझ’गडा हुनेसम्भावना छ।यात्रा घा’तक बन्न सक्छ ।राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु होला।नया काम को सुरुवात नगर्नु होला।पानि धे्रै पिउनु होला। बिदेशको योग रहेको छ। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
मन मा सन्तुष्टि रहने छ। बोलि ले साथ दिने छ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। आज नया काम को सुरुवात नगर्नु होला।सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । समाजसेवामा मन जानेछ ।आय बढ्ने छ। पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुनेछ। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
घर तथा जमिन जोड्ने योग रहेको छ। व्यापार व्यावसायमा लगानि हुँने योग रहेकोछ । माया प्रेमको बन्धन थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।जस मिल्ने योग छ तर शत्रु हरु बलिया हुने छन। खाने कुरा मा ध्यान दिनु होला। पेट को समस्या हुने छ। आजको शुभ अंक ४ ९ र १२ रहेको छ।